सुन तस्करी प्रकरण : कायस्थलाई जोगाउने लामा र पाठकले यसरी फसाएका थिए सहपाठीहरुलाई | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सुन तस्करी प्रकरण : कायस्थलाई जोगाउने लामा र पाठकले यसरी फसाएका थिए सहपाठीहरुलाई
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा पूर्व डिआईजी गोविन्द निरौला, एसएसपी दिवेश लोहनी, एसपी विकासराज खनाल, डिएसपी प्रजित केसी र सई बालकृष्ण सञ्जेललाई उच्च अदालत बिराटनगरले साधरण तारेखमा छाड्न दिएको आदेशलाई नै सदर गरेपछि उनीहरुले ढिला नै भए पनि न्याय पाएका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत विराटनगरकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याको छानविन गर्न सहसचिव इश्वरराज पौडेल नेतृत्वको समितिको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले प्रहरी अधिकृतलाई निलम्वन गरेको थियो ।
समितिमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी बसन्त लामा र सुदिप पाठक पनि सँलग्न थिए। लामा र लोहनी एउटै व्याजका हुन भने लामाको योजनामा डिएसपी पाठकले उनीहरुबिरुद्द झुटो बयान गराएर फसाउन भुमिका खेलेका थिए ।
तर, बिना प्रमाणको यो खेल लामो समय टिक्न सकेन र पीडित प्रहरी अधिकारीहरुले न्याय पाए पनि उनीहरुको करिअरमा भने दाग लाग्न पुग्यो। । सबैभन्दा अचम्म त के छ भने त्रिभुवन बिमानस्थलबाट बाहिरिएको भनिएको साँढे ३३ केजी सुन अहिलेसम्म पनि फेला परेको छैन। जसका कारण समिति नै निकम्मा साबित बन्न पुगेको थियो । समितिका सदस्य पाठकमाथि नै चोरी गाडी र अकुत सम्पत्ति प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोगअनुसन्धान आयोगले छानविन गरेको थियो।
टीकापुरमा डीएसपी हुँदा प्रहरी हवल्दार ताराबहादुर ठकुल्लाको नाममा से१च १८१० नम्बरको चोरीको हुन्डाई क्रेटा कार दर्ता गरी प्रयोग गरेको र गाडी चोरी गर्ने गिरोहलाई पाठकले संरक्षण दिएको उजुरी माथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
तर, अख्तियारमा पटक पटक बयान दिएर मुद्दाबाट क्लिन चिट नपाएको अवस्थामा पनि पाठकलाई गृहले सुन काण्डको अनुसन्धान समितीमा राखेपछि अख्तियार अनुसन्धानबाट पछाडि हटेको थियो ।
त्यस्तै, मकवानपुर र कास्कीमा प्रहरी प्रमुख भएर बस्दा पाँच करोड भन्दा बढी मुल्य बराबरको अकुत सम्पत्ति जोडेका लामा असक्षम र प्रहरी अधिकारी हुन भन्ने कुरा उनी काठमाडौंको प्रमुखमा ८ महिना भन्दा बढी समय टिक्न नसकेबाट पनि पुस्टि हुन्छ। उनको अकुत सम्पत्तिको फाइल पनि अख्तियारमा पेन्डिङ नै छ।
एसएसपी लामाले तस्करीमा मुछिएका पूर्व एआईजी विजयलाल कायस्थलाई उन्मुक्ति दिलाउन भूमिका खेलेका थिए। सुन तस्करी र शाक्य हत्याका मुख्य नाइके गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेतीसँग एयरपोर्टमा छँदादेखि नै एसएसपी श्याम खत्रीले साँठगाँठ गरेका थिए । खत्री एयरपोर्टमा रहँदा उनका हाकिम थिए तत्कालीन डीआईजी विजयलाल कायस्थ । कायस्थ १६ महिनासम्म सुन तस्करहरुकै सेटिङमा एयरपोर्टमै बसेका थिए ।
कायस्थका हरेक आदेश खत्रीले पालना गर्दै आएका थिए । तर, लामा र पाठकले तस्करीलाई संरक्षण गर्ने कायस्थको नाम नै काट्न लगाइ ठुलो आर्थिक लाभ लिएको प्रहरी स्रोत वताउंछ।
लहरो तान्दा पहरो गर्जने भनेझैं कायस्थलाई आदेश दिने तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल पनि सुन तस्करी काण्डमा तानिने भएपछि कायस्थमाथि अनुसन्धान नै हुन सकेन । कायस्थले एयरपोर्टमा रहँदा गोरेको सूचनाको आधारमा युवतीहरुलाई नै सुराकी राखेर झण्डै ४० किलो सुन बरामद् गरेका थिए ।
जुन बिषयमा अख्तियारले समेत अनुसन्धान गरेको थियो। बरामद् झण्डै २० किलो अवैध सुनको सुराकीमा अस्मिता झा नाम गरेकी महिलाको नाम राखेर कायस्थले कमिसन खाएका थिए । तर, तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग सेटिङ रहेका कारण कायस्थमाथि सुराकी प्रकरणमा पनि कुनै कारवाही नै भएन।
दसैँअघि आउला मेलम्चीको पानी ?
काठमाडौँ । आगामी दशैँअघि नै काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी आउने कुराले काठमाडौंबासीलाई खुसी थपेको छ। काठमाडौँ बासीका लागि २०७५ साल लामो…
पोखरा । पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वमा नै विशिष्ट पहिचान बनाएको अन्नपूर्ण सेरोफेरोमा बर्सेनि पदयात्राका लागि पुग्नेको संख्या बढ्दै गएको…
पुरुषहरुको अन्डकोष किन सुन्निन्छ ?
म २२ वर्षीय अविवाहित युवक हुँ । केही दिनदेखि मेरो दाहिने अण्डकोष दुख्नुका साथै केही सुन्निएको छ, जसले गर्दा…
काठमाडाैं । माघीमा कैलालीका तीन स्थानीय तहले माघ २ गते सार्वजनिक बिदा दिएका छन् । टीकापुर नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका र…
जेसीबी र अटोरिक्सा ठोक्किँदा ३ जनाको मृत्यु
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा २ सवारी आपसमा ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा ३ जनाको ज्यान गएको छ ।
से १ प ७३३ नम्बरको…
सुनको मुल्यले अहिलेम्मकै रेकर्ड तोड्यो, आज १५ सयले बढेर ८० हजार नाघ्यो 11 views